घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई ताजा समाचार » अब हवाई को यात्रा किन? अर्को पटक भ्रमण गर्नुहोस्!
संघ समाचार • उड्डयन • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • पुनर्निर्माण • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
त्यहाँ हवाई को यात्रा गर्न को लागी कुनै कारण छैन अब गभर्नर Ige द्वारा आजको पत्रकार सम्मेलनमा सन्देश छ। के तपाइँ हवाई को लागी तपाइँको छुट्टी बुक गर्नुभयो? तपाइँ तुरुन्तै पुनर्विचार गर्न चाहानुहुन्छ। को Aloha राज्य नयाँ COVID-19 का एक तूफान को सामना गरीरहेको छ र यसको बाटोमा आउँदैछ भनेर सम्हाल्न को लागी बिरामी हुन सक्छ। आज नयाँ महामारी को मामला मा रेकर्ड को रेकर्ड दिन थियो। डा। चार, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य विभाग को निदेशक द्वारा सबैभन्दा राम्रो सल्लाह, घर रहन को लागी हो!
एलिजाबेथ ए चार, एमडी, सेप्टेम्बर १,, २०२० मा हवाई गभर्नर डेभिड इगे द्वारा नियुक्त भएपछि स्वास्थ्य विभाग को नेतृत्व लिनुभयो।
हवाई गभर्नर Ige संग आज एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले हवाई र आगन्तुकहरुलाई घर मा बस्न र यस समयमा यात्रा नगर्न आग्रह गरे।
आज, हवाई राज्य मा 1,167 अतिरिक्त संक्रमण रिपोर्ट गरिएको थियो, भाइरस को प्रकोप पछि अहिले सम्म रेकर्ड गरिएको उच्चतम संख्या को दोब्बर भन्दा बढी।
भाइरसको फैलावट हामी परिवर्तन नभएसम्म परिवर्तन हुने छैन, एक धेरै नर्भस एलिजाबेथ चारले आज बिहान हवाई गभर्नर इगेले आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुलाई भने।
को कोभिड -१ report को पछिल्लो रिपोर्ट नेपाल सरकार बाट Aloha राज्य, त्यहाँ १,१1,167 नयाँ कोभिड केसहरु छन्, जम्मा ४,, ५४49,564 मा कुल मामिला ल्याईएको छ। ती मध्ये २ 2,971 XNUMX१ लाई अस्पताल भर्ना आवश्यक छ।
जबकि अस्पताल को ठाउँ अझै उपलब्ध छ, कोभिड १ Del डेल्टा भेरियन्ट को समुदाय फैलिएको सर्पिल प्रभाव सास टाढा मात्र बिरामी मान्छे को लागी होइन तर समुदाय मा सबै को लागी सास लिन्छ।
जब यो प्रकाशनले चेतावनी दियो आगन्तुकहरु कि नयाँ प्रतिबन्ध ठाउँ मा हुनेछ, थोरै हामी जान्दछौं कि कती नराम्रो यो4छोटो दिन भित्र प्राप्त हुनेछ।
कृपया सही कुरा गर्नुहोस् र हवाई को लागी अर्को पटक यात्रा गर्नुहोस्!
eTurboNews पाठक, सुश्री जे, यस प्रकाशन को लागी एक टिप्पणी पोष्ट गर्दै:
म यो समय हवाई मा आउन सिफारिस गर्दैन। जे भए पनि २ हप्तामा जे भए पनि प्रतिबन्धहरु को बावजूद, के तपाइँ साँच्चै एक चिकित्सा आपतकालिन को मौका चाहनुहुन्छ र आशा छ कि केहि गरीब नर्स वा डाक्टर जो आफ्नो डबल वा ट्रिपल शिफ्ट मा काम गरीरहेछन् तपाइँलाई पर्याप्त उपचार दिन को लागी समय छ?
चीजहरु सधैं भीड हुन्छ जब हामी उच्च पर्यटक संख्या छ। यो एक वास्तविक चुनौती एक रेस्टुरेन्ट मा पचास प्रतिशत अधिभोग अनुमति प्राप्त हुन सक्छ।
बासिन्दाहरु तपाइँको अनुहार को लागी राम्रो संग काम गर्न वा हुन सक्दैनन् तर जब हाम्रा बच्चाहरु अस्पतालमा भर्ना भईरहेका छन्, हामी मध्ये धेरै जसो तपाइँ यहाँ हाम्रो चिकित्सा संसाधनहरु लिन चाहनुहुन्न।
मलाई थाहा छ तपाइँको यात्रा को लागी भुक्तान गरीएको छ, तर धेरै जसो एयरलाइन्सहरु धेरै लचिलो वर्तमान मा छन् र कम से कम तपाइँ भविष्य को क्रेडिट दिन इच्छुक हुनुहुन्छ। तपाइँको आवास को रूप मा, तपाइँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ हाम्रो संसाधनहरुमा कर लगाउन चाहनुहुन्न र के हुन्छ के गरेर सही काम गर्ने कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ।
कृपया सही काम गर्नुहोस् र अर्को पटक आउनुहोस्।
गभर्नर इगेलाई यो गलत लाग्यो जब उनले भने कि अधिक प्रतिबन्धहरु लाई पुन: लागू गर्ने प्लेट मा अझै छैन। जाहिर छ, आर्थिक कारणहरु प्राथमिकता लिन्छन्, जस्तै उनीहरु फ्लोरिडा, टेक्सास, लुइसियाना, र धेरै अन्य अमेरिकी राज्यहरुमा गर्छन्।
वर्तमान मा, सबै अमेरिकी काउन्टीहरु को 77.98%, जो कुल 2,511 काउन्टीहरु को, यो घातक भाइरस को समुदाय फैलावट को उच्चतम संख्या र प्रतिशत रेकर्ड गरीरहेको छ, प्रति १०,००,००० जनसंख्या को १०% भन्दा बढी केसहरु संग।
धेरै भन्छन् कि हवाई आफ्नो पर्यटन अर्थव्यवस्था को अर्को बन्द बर्दाश्त गर्न सक्दैन। जे होस् ठाउँ मा प्रतिबन्ध मास्क लगाउने, रेस्टुरेन्ट मा ५०% कब्जा स्तर, र पसलहरु को लागी सीमाहरु-सबै मात्र प्रतीकात्मक छन्। गत वर्ष, एक दिनमा मात्र १०० कोभिड केसको बृद्धिले राज्यव्यापी कर्फ्यू लगायो र होटल, पसल र रेष्टुरेन्ट बन्द गरी पूर्ण तालाबन्दी भयो।
सधैं जस्तै, हवाई पर्यटन प्राधिकरण शान्त रहन्छ र नागरिकहरु, आगन्तुकहरु, र पत्रकारहरु लाई प्रतिक्रिया दिईरहेको छैन। आजका १,१1,167 नयाँ केसहरु बासिन्दाहरु को लागी एक रातो लाइन overstepping छन्, तर कसले सुन्दै छ?
कूल जनसंख्या को .61.2१.२% लाई पूर्ण रुपमा खोप लगाइएको छ। पछिल्लो 14 दिन मा रिपोर्ट गरीएको कुल केसहरु 7,327 थियो। आज सम्मको कुल मृत्यु ५४547 छ।
हामी अब COVID मा एक तूफान को लागी तयारी गरीरहेका छौं, हवाई गभर्नरले आज भने। एक गभर्नर को रूप मा परिचित जो सधैं शान्त रहन्छन्, उनी आजको पत्रकार सम्मेलनमा देखी हल्लाए।
एक एपी रिपोर्टर को जवाफ मा, गभर्नर तर्क दिए नयाँ केसहरु को २% मात्र आगन्तुकहरु बीचमा छन्। आगन्तुकहरु नकारात्मक परीक्षण वा खोप कागजात हुनु पर्छ।
खोप कागजात भएकाहरु सकारात्मक र संक्रामक हुन सक्छन्, तर यो कहिल्यै थाहा हुने छैन।
राज्यपालले भने कि भारी खतरा समुदाय को भाइरस को फैलावट हो। एक व्यक्तिले १,००० अरुलाई दिन सक्छ। राज्यपाल र स्वास्थ्य निर्देशक राज्य को लागी भाइरस समुदाय मा छ, स्वीकार गर्दैनन् कि पर्यटकहरु एउटै समुदाय मा छन्।
आफ्नै संसारमा, हवाई नेताहरु पर्यटकहरु बारम्बार टापुहरु मा बारम्बार बिभिन्न रेस्टुरेन्ट र समुद्र तटहरु मा विश्वास गर्छन्। यो धेरै धेरै अज्ञानी र सत्य बाट धेरै टाढा छ। हवाई जस्तै साना टापुहरुमा सबैजना सबै संग मिल्छन्, पर्यटकहरु जताततै छन्, र Waikiki वा Lahaina पृथक पर्खाल मा क्षेत्रहरु छैनन्।
डा चार सही थियो जब यसो भन्दैमा कोहि को लागी यात्रा को लागी कुनै कारण छैन। उनले थपे: "तपाइँलाई थाहा छैन कि तपाइँ प्लेनमा कोको छेउमा बस्नुहुन्छ।"
आगन्तुकहरु हवाई को लागी नयाँ यात्रा प्रतिबन्धहरुको सामना गरिरहेका छन्।
हवाई मा सावधानी अपनाउनुहोस्!
Glass Lewis ले Arabesque सँग बृद्धि गर्न साझेदारी गर्दछ ...
जुर्जेन टी स्टिनेमेट्ज भन्छन्:
अगस्त २,, २०२० ० 13::2021
Mahalo Ingrid तपाइँको दयालु प्रतिक्रिया को लागी। हामीलाई पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी सबै चिन्तित छौं। म यहाँ १ 1988 moved मा बसाइँ सरेको थिएँ र १ 1976 since देखि पर्यटन उद्योगमा काम गरिरहेको थिएँ।
यो मलाई दुख्छ भन्नको लागी पर्यटन बन्द हुनु पर्छ! तर यो तब सम्म हुन्छ जब सम्म हामी यो अज्ञात समय समस्या मा एक वास्तविक ह्यान्डल प्राप्त।
दुर्भाग्यवश, यस राज्य मा कुनै स्पष्ट दिशा छैन, र पर्यटन नेताहरु (HTA विशेष गरी) कोभिड १ started शुरू भए पछि हरेक मौन थिए।
इंग्रिड पीटरसन भन्छन्:
यो सन्देश पोस्ट गर्न को लागी धेरै धेरै धन्यवाद! (१ 1963 XNUMX३ मा एक बच्चा को रूप मा यहाँ सारिएको एक निवासी बाट।)